Story Saver for Instagram - Story Assistant 1.1.1.7 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.1.1.7 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Application မ်ား ကိရိယာမ်ား Story Saver for Instagram - Story Assistant
Story Saver for Instagram - Story Assistant ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ဇာတ်လမ်းလက်ထောက် (ဇာတ်လမ်း Saver) အသုံးဝင်သောအကူအညီနဲ့အသုံးပြုသူများက Instagram ကိုလွယ်ကူပါတယ်မန်နေဂျာပုံပြင်ဗန်းအသုံးပြုကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။
+ အသုံးပြုသူရိုးရှင်းသော interface နဲ့အလွယ်တကူသုံးပါ။
သုံးနေစဉ် + ပံ့ပိုးမှုမျိုးစုံအကောင့်သင်အဆင်ပြေစေရန်ကူညီပေးသည်။
သင်ကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်း + ပံ့ပိုးမှု bookmark ကိုအကောင့်။
+ ပံ့ပိုးမှုရှာဖွေရေးနှင့်ပိုပြီး features တွေ (မီဒီယာနှင့်အတူဆော့ကစားကယ်တင်) ။
Fast တင်နဲ့အလင်း + ။
သငျသညျမသုံးခင်သင့်အကောင့်ကို log in လုပ်ဖို့လိုအပ်ဒီ app ကိုအသုံးပြုဖို့ + ။
+ app ကိုမဆိုပုံပြင်ကိုရှာဖွေသို့မဟုတ်ရုတ်တရက်အလုပ်လုပ်ကိုင်ရပ်တန့်မနိုင်လျှင်, သင့်အပေါ် Instagram ကို app ထဲမှာပုံပြင်ဖောက်ပြန်ကြိုးစားသို့မဟုတ်စစ်ဆေးနောက်မှ re-ရဲ့ login ကြောင့်ဖယ်ရှားပစ်ရန် "Accounts ကို" နှင့်ရှည်လျားသောစာနယ်ဇင်းအဟောင်းအကောင့်ဖွင့်ဖို့ကြိုးစားကျေးဇူးပြုပြီး စက်ကို။
1. ဒီ app Instagram ကိုနှင့်အတူဆက်နွယ်ခြင်းမရှိပါ။
2. Re-အပ်လုဒ်တင်ပုံရိပ်ကို / ဗွီဒီယိုဇာတ်လမ်းများနှင့်အားပေးအားမြှောက်သည်မဟုတ်, ပိုင်ရှင်ခွင့်ပြုချက်ကိုရှာကွပါ။ အဆိုပါ IG အသုံးပြုသူအခွင့်အရေးကိုလေးစားပါ။
3. မဆိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဒေါင်းလုတ်ဆွဲသို့မဟုတ် contents တွေကိုနှင့် / သို့မဟုတ် Intellectual property ကိုအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများ Re-အပ်လုဒ်တင်အသုံးပြုသူရဲ့တစ်ဦးတည်းသောတာဝန်သာဖြစ်ပါသည်။
ကျေးဇူးပြုပြီးတုံ့ပြန်ချက်သုံးနေစဉ်သင်သည်မည်သည့် bug ကိုရှိပါကငါ့ကိုဒါနဲ့ app ကို fix နိုင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Story Saver for Instagram - Story Assistant အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Story Saver for Instagram - Story Assistant အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Story Saver for Instagram - Story Assistant အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Story Saver for Instagram - Story Assistant အား အခ်က္ျပပါ
Story Saver for Instagram - Story Assistant ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Story Saver for Instagram - Story Assistant အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.1.1.7
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://androidappkimcy929.wordpress.com/main-page/privacy-policy-of-kimcy929/
App Name: Story Saver for Instagram - Story Assistant
Release date: 2019-09-06 16:28:15
လက်မှတ် SHA1: B0:D8:BD:BB:87:A1:0F:1C:9C:23:A8:AE:5D:A0:A8:0A:81:C7:D6:14
Story Saver for Instagram - Story Assistant APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ